पहिलो त्रैमासमा नागरिक लगानी कोषको नाफा २०.६३ % ले बढ्यो
मंसिर ७, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नागरिक लगानी कोषले रू. १४ करोड ५९ लाख ६५ हजार खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको नाफा गत वर्षभन्दा यस वर्ष २० दशमलव ६३ प्रतिशत बढी भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. १२ करोड १० लाख खुद नाफा गरेको थियो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम्पनीको कुल आम्दानी १६ प्रतिशत बढी भएको छ । गत वर्ष रू. २२ करोड ४३ लाख कुल आम्दानी गरेकोमा यस वर्ष रू. २६ करोड १२ लाख ५० हजार भएको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ६४ करोड ६ लाख ९९ हजार रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. ८ अर्ब २८ करोड ४८ लाख ५० हजार छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम यस वर्ष ७७ प्रतिशत बढी कायम भएको हो । गत वर्ष यस अवधिमा रू. ४ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख जगेडा कोष रकम रहेको थियो ।
कोषको उपयोग गर्दै कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा गत वर्षभन्दा करीब १५ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब ५० अर्ब ५५ करोड ४५ लाख १० हजार लगानी गरेको छ । मुुद्धती निक्षेपमा गत वर्षभन्दा १५ दशमलव ८० प्रतिशत बढी रू. ९१ अर्ब १२ करोड ५५ लाख ८९ हजार जम्मा गरेको कम्पनीले नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा यस वर्ष रू. १ अर्ब ५ करोड लगानी गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
नाफामा वृद्धि भएपनि यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी भने घटेको छ । गत वर्ष यस अवधिमा रू. ३८ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी यस वर्ष रू. ३३ मा झरेको हो । गत वर्ष रू. १८४ प्रतिशेयर नेटवर्थ यस वर्ष भने रू. २३८ पुगेको छ ।